The top toban shaqooyin loogu talogalay qaxootiga - Sancada iyo ugu fiican shaqooyinka iibka tafaariiqda | USAHello | USAHello
The top toban shaqooyin loogu talogalay qaxootiga – Sancada iyo ugu fiican shaqooyinka iibka tafaariiqda
Baro shaqooyinka iibka fiican, shaqada beerta ku shaqooyin tafaariiqda iyo iibka in aad samayn kartaa guriga.
Sales ka dhigan tahay wax kasta oo ka soo harta iibka alaabta dukaanka xaqiiqada ah in qof ku matalaya shirkadda in iibka. Waxa kale oo ay ku siinaysaa fursad iibka ah inay ka shaqeeyaan laynoogu guriga. Sales daboolaa la warshado kale oo badan, ka fashion daryeelka caafimaadka. Waxay noqon kartaa shaqo iibka shaqo ku meel gaar ah, laakiin mid ka mid ah shaqooyinka ugu fiican iibka noqon kartaa xirfado nolosha oo dhan.
iibka tafaraaruqa ka mid ah, taas oo macnaheedu yahay wax si toos ah dadka iibinaya. Malaayiin qof ayaa ka shaqeeya iibka tafaariiqda. Waxaa had iyo jeer waa baahida weyn wakiilada iibka tafaariiqda, laakiin shaqo kuwaas oo aan la had iyo jeer si fiican u bixisay.
Sales ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah iibinta waxyaalaha kii of iibiyaha, sida dukaanka. Waxa kale oo ay noqon kartaa user weyn, sida isbitaalka. Waxa kale oo ka mid ah sale of alaabta iyo adeegyada sida advertising iyo caymiska.
Sales bixisaa badan warshadaha shaqooyin kala duwan. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah:
Kaaliyaha Sales – Work dukaanka waa shuqul wanaagsan ee muddada-gaaban ama ku meel gaar ah oo leh waayo-aragnimo yar ama aan lahayn waayo-aragnimo. Waxaa jira had iyo jeer bannaan furan.
Lacaghayaha – shaqo wanaagsan waayo cid kale oo aan ka fikiraan hawlaha soo noqnoqda. Waxaad u baahan tahay waqti dheer taagan oo ay hayaan heshiis saaxiibtinimo ee macaamiisha.
Sales by phone – iibka telefoonka Mobile siinayaa dabacsanaan si ay u shaqeeyaan guriga, laakiin waxaa laga yaabaa in ay adag tahay si aad u hesho mushahar fiican.
wakiilka iibka Pharmaceutical – iibinta dawooyinka iyo qalabka caafimaadka shaqada waxaa la bixiyaa, laakiin waxaa loo arkaa tartan. Goobtani waxa ay u baahan tahay khibrad iyo aqoon berrinkii daryeelka caafimaadka.
Technology Wakiilka Sales – Microsoft, IBM, Adobe, Sellsvors ka mid ah shaqooyinka technology bixiya badan oo mushaar sare iibka wakiilada iibka kuweenna haysta shirkadaha xirfadaha.
Maareeyaha Sales – Maareeyaha Sales waa hoggaamiyaha kooxda ayaa ka shaqaynaysa qorshaynta iyo maaraynta wakiilada iibka
.Sales Caymiska – iibiye caymiska Good sida ugu badan ee dadka waxaa lagula talinayaa inay iyaga ka iibiyaan. iibka caymiska u baahan yihiin tababar iyo liisan State.
estate Real – Iibinta hanti bixiyaa fursado si ay u helaan lacag aad u badan, laakiin waa beer tartan. dilaaliinta hantida maguurtada ah iyo wakiilada iibka baahan liisanka dawlad iyo wax badan oo ka mid ah aqoon ku saabsan sharciga.
Sales Online – Iibinta waxyaabaha online waa beer wanaagsan qof jeclaan lahaa inuu ka shaqeeyo inuu nafsaddiisa.
Sales advertising – Iibinta xayeysiis shirkadaha iyo shakhsiyaadka waa shaqo inta badan waxaa loo sameeyaa by phone. Inta ugu badan ee nidaamka advertising online u baahan yahay aqoon gaar ah ee makiinado ay search iyo e-commerce.
Ma shaqo iibka waxaa shaqada ii wanaagsan?
Ma aha qof kasta wuxuu leeyahay iibka shakhsiyeed! hawlaha Sales ku haboon dadka oo noqon qof saaxiibtinimo, edeb, iyo dadan. Qancinta macnaheedu waa in aad u wanaagsan tahay dadka qanci. Dhegayso waxa ay macaamiishu leh this ka dhigi doonaa in aad si fiican u wakiisho, halkaas oo waad garan doontaa waxa ay doonayaan.
Shaqooyinka Sales ee iibka tafaariiqda Ooualembaat dhex shaqayn phone waa wanaagsan yahay, waayo, dadka in ay ka shaqeeyaan iyo waxyaabo kale ee nolosha. shaqada iibka Phone aad u ogolaanaya guriga, oo aad u ogolaan in shaqooyin shaqada tafaariiqda ee gelinba.
Waxaad ka heli kartaa shaqo shaqo tafaariiqda ama phone iibka iyada oo aan waayo-aragnimo ka hor, laakiin waxaad u baahan doontaa a xirfadaha luqadda Ingiriisiga wanaagsan for iibka shaqooyin wanaagsan. Waayo, kuwo badan oo shaqooyinkan ah, shaqo-aad tababari doonaa in ay isticmaalaan hababka ay.
shaqooyin kale iibka u baahan tahay xirfado iyo waayo-aragnimo ka hore. Inta badan maamulayaasha iibka iyo iibka wakiilada shahaadooyinka jaamacadeed. Degree / degree in ganacsi laga yaabaa in iibka iyo suuq-geynta.
Waxaa jid kale maamulka iibka waa in ay ka shaqeeyaan, jidka aad ku. Waxaad bilaabi kartaa sida iibka caawiye ah ama iibka phone, laakiin waxaad dalban kartaa shaqo leh heer sare ah shirkad aad sida ugu dhaqsaha badan aad u leeyihiin waayo-aragnimo qaar ka mid ah ayaa muujisay xirfadaha ee iibka.
Fiiri cutubka kuu dhow
kulliyado badan ayaa fasal ee Iibka iyo suuq-. Waxaa laga yaabaa in fasalada gaar ah dadka cusub iyo ardayda English. Raadi kulliyadda beesha kuu dhow.
ku siin doonaa hay'adda / urur-dejinta xarunta shaqada xirfadaha aasaasiga ah iyo fasallada Ingiriisiga. Raadi Xarunta Shaqada ee kuugu dhow.
Ma u baahan tahay si ay u GED®?
Isticmaal xarunta shaqada ee degmada aad leedahay
xarumaha shaqada Dawladda ee magaalo kasta oo lacag la'aan ah. Bixiyaan talo iyo sii liiska shaqooyinka deegaanka. Waxay ka caawinaya in taariikh nololeedka iyo hab-dhiska shaqada. Waxay kaa caawin kara in aad la helo tababar ku saabsan shaqada iyo waxbarashada. Raadi Xarunta Shaqada ee kuugu dhow .
Salesjobs.com Waa goobta shaqo ku takhasusay oo dhan cayn kasta oo shaqo iibka
Success wareysi shaqo
Iibinta alaab lala online
links waxtar leh si kale
Career Tafaariiqda Career Onestop Wakiilka Sales
Macluumaadka iyo dowladda statistics xirfado iibka